उबुन्टु १.18.04.०XNUMX | VLC को नयाँ संस्करण कसरी पाउने Ubunlog
उबुन्टु १.18.04.०XNUMX मा कसरी VLC को नयाँ संस्करण प्राप्त गर्ने
VLC एक सबैभन्दा लोकप्रिय र पूर्ण खेलाडी हो जुन हामी उबन्टुको लागि फेला पार्न सक्छौं। यद्यपि यस खेलाडीसँग आधिकारिक उबन्टु रिपोजिटरीमा पछिल्लो संस्करण छैन, जसले हामीलाई केही कार्यक्षमताहरू गुमाउँदछ।
र यदि उबन्टु १ instead.०18.04 को सट्टा हामीसँग उबन्टु १ 16.04.०XNUMX छ भने समस्या अझ गम्भीर हुन्छ VLC संस्करण क्रोमकास्ट जस्तै ग्याजेटहरूमा उपयुक्त छैन। तर यो सजिलैसँग उबन्टुमा फिक्स गर्न सकिन्छ।सबैभन्दा प्रभावकारी विधिहरू मध्ये एक VLC को नयाँ संस्करण छ स्न्याप प्याकेज को उपयोग गर्न को लागी। हालमा, स्न्यापमार्फत हामी VLC को पछिल्लो स्थिर संस्करण साथै विकास संस्करण स्थापना गर्न सक्दछौं।
हामी औबन्टुका लागि प्रयोग गर्न सक्ने आधिकारिक VLC भण्डारहरूको पनि प्रयोग गर्न सक्छौं। जे भए पनि, हामी एक वा अर्को तरिका छनौट गरौं। हामीले हामीसँग VLC को संस्करण अस्थापना गर्नु अघि। किनकि पूर्वनिर्धारित रूपमा उबन्टुले यसको भण्डारहरूको संस्करण प्रयोग गर्दछ, स्न्याप वा VLC भण्डारको संस्करण होईन।
VLC संस्करण विस्थापित गर्न हामीले टर्मिनल खोल्नु पर्छ र निम्न कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ:
एकपटक हामीले पुरानो संस्करणको स्थापना हटाएपछि, नयाँ संस्करण कमाण्डको साथ स्थापना गर्न सकिन्छ:
र यदि हामी विकास संस्करण स्थापना गर्न चाहन्छौं भने हामीले निम्न कार्यान्वयन गर्न पर्छ:
यदि हामी छनौट गर्दछौं VLC पीपीए भण्डारहरू, तब टर्मिनलमा हामीले निम्न कार्यान्वयन गर्नु पर्छ:
जुनसँग VLC को पछिल्लो संस्करण स्थापना हुनेछ। प्रक्रिया सरल छ तर म जोड दिन चाहन्छु कि हामीले यी विधिहरू प्रयोग गर्नु अघि पुरानो संस्करणको स्थापना रद्द गर्नुपर्दछ तर पूर्वनिर्धारित रूपमा उबन्टुले पुरानो संस्करण प्रयोग गर्नेछ र आधुनिक संस्करण प्रयोग गर्दैन, हामीसँग केहि समस्याहरू छन्।
लेखको पूर्ण मार्ग: ubunlog » Ubuntu » उबुन्टु १.18.04.०XNUMX मा कसरी VLC को नयाँ संस्करण प्राप्त गर्ने
फर्नांडो रोबर्टो फर्नांडीज भन्यो
यो कुनै श doubt्का बिना, उत्तम मल्टिमेडिया प्लेयर हो।
फर्नान्डो रोबर्टो फर्नांडीजलाई जवाफ दिनुहोस्
पेद्रो गोन्जालेज भन्यो
यसमा कुनै श .्का छैन कि यो सब भन्दा पूर्ण भिडियो प्लेयर हो ... उबुन्टुले यसलाई पूर्वनिर्धारित रूपमा ल्याउनु पर्छ…।
पेड्रो गोन्जालेजलाई जवाफ दिनुहोस्
समुद्री डाकू भन्यो
म तपाईँसँग सहमत छु!
Gersain लाई जवाफ दिनुहोस्
होरासियो अल्फारो भन्यो
रिपोजिटरी थप्दा र अद्यावधिक गर्दा यो त्रुटि पठाउनुहोस्
त्रुटि: 18०XNUMX http://ppa.launchpad.net/videolan/stable-daily/ubuntu बायोनिक रिलीज
404०91.189.95.83 फेला परेन [IP: .80 १.१XNUMX .XNUMX .XNUMX२.२०००]
Horacio Alfaro लाई जवाफ दिनुहोस्
मलाई लाग्छ कि यो चलाउनको लागि एक राम्रो विचार हो:
एड-अनहरूका लागि धेरै मेगाबाइट पुस्तकालयहरू मेटाउन, प्रति प्रति तस्वीर हामी उनीहरूको नयाँ संस्करणहरू पाउनेछौं, हैन?
नमस्कार धेरै धेरै मानवीय कामका लागि धन्यबाद! सफलताहरू!
Laride लाई जवाफ दिनुहोस्
मलाई २०.०20.04 मा स्थापना गर्न समस्या भइरहेको छ, कुनै विचारहरू?
एनिसिको डे पाज भन्यो
ubunto उत्तम / त्यो लेन्स हो।
Aniceto De Paz लाई जवाफ दिनुहोस्
सीपीयू पावर प्रबन्धक, सीपीयू फ्रिक्वेन्सी नियन्त्रण र प्रबन्ध गर्दछ
उबुन्टु र डेरिभेटिभहरूमा ध्वनि थिमहरू कसरी स्थापना र कन्फिगर गर्ने?